စစ်ကိုင်းတိုင်းတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းသစ် ဆောက်လုပ်ရန် မြေသန့်ရှင်းလင်းရာမှ ငွေဒင်္ဂါး (၁၂၀)ပြားအား တူးဖော်ရရှိ – Askstyle
စစ်ကိုင်းတိုင်းတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းသစ် ဆောက်လုပ်ရန် မြေသန့်ရှင်းလင်းရာမှ ငွေဒင်္ဂါး (၁၂၀)ပြားအား တူးဖော်ရရှိ
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသစ္ ေဆာက္လုပ္ရန္ ေျမသန္႔ရွင္းလင္းရာမွ ေငြဒဂၤါး (၁၂၀)ျပားအား တူးေဖာ္ရရွိ
၁၁. ၂. ၂၀ ၂၀ ရက္ေန႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ပင္လည္ဘူးၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ဒြန္းေက်း႐ြာအုပ္စု၊ အင္ကုန္းေက်း႐ြာ၌ နံနက္ (၈)နာရီခန္႔တြင္ သုဓမၼာသာရ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသစ္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားမွ ေျမေနရာသန္႔ရွင္ေရးေဆာင္႐ြက္ေနစဥ္ အင္ကုန္းေက်း႐ြာေန
ဦးမင္းစိုးလင္း(ဘ)ဦးထြန္းေ႐ႊ မွ GEORGE V KING & EMPEROR ေငြဒဂၤါး(၇) ျပား၊ EDWARD VII KING & EMPEROR ေငြဒဂၤါး(၄၅) ျပား၊ VICTORIA QUEEN ေငြဒဂၤါး (၁၂) ျပားႏွင့္ VICTORIA EMPERESS ေငြဒဂၤါး (၅၆) ျပား စုစုေပါင္းေငြဒဂၤါး (၁၂၀) ျပားအား တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။
အဆိုပါ ေငြဒဂၤါး (၁၂၀) ျပားအား အင္ကုန္းေက်ာင္းဆရာေတာ္ႀကီး၏ မိန္႔ၾကားခ်က္အရ ဦးဝင္းေအာင္(ဘ)ဦးအုန္းေဖ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ေဆာင္သစ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ထံတြင္ ျဖင့္ထိန္းသိမ္းထားရွိ ေၾကာင္သိရွိရပါသည္။ZayarThaw
ဘုန်းကြီးကျောင်းသစ် ဆောက်လုပ်ရန် မြေသန့်ရှင်းလင်းရာမှ ငွေဒင်္ဂါး (၁၂၀)ပြားအား တူးဖော်ရရှိ
၁၁. ၂. ၂၀ ၂၀ ရက်နေ့ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်၊ တောင်ဒွန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ အင်ကုန်းကျေးရွာ၌ နံနက် (၈)နာရီခန့်တွင် သုဓမ္မာသာရ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသစ် ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် ရွာသူရွာသားများမှ မြေနေရာသန့်ရှင်ရေးဆောင်ရွက်နေစဉ် အင်ကုန်းကျေးရွာနေ
ဦးမင်းစိုးလင်း(ဘ)ဦးထွန်းရွှေ မှ GEORGE V KING & EMPEROR ငွေဒင်္ဂါး(၇) ပြား၊ EDWARD VII KING & EMPEROR ငွေဒင်္ဂါး(၄၅) ပြား၊ VICTORIA QUEEN ငွေဒင်္ဂါး (၁၂) ပြားနှင့် VICTORIA EMPERESS ငွေဒင်္ဂါး (၅၆) ပြား စုစုပေါင်းငွေဒင်္ဂါး (၁၂၀) ပြားအား တူးဖော်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါ ငွေဒင်္ဂါး (၁၂၀) ပြားအား အင်ကုန်းကျောင်းဆရာတော်ကြီး၏ မိန့်ကြားချက်အရ ဦးဝင်းအောင်(ဘ)ဦးအုန်းဖေ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ဆောင်သစ်ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီ ထံတွင် ဖြင့်ထိန်းသိမ်းထားရှိ ကြောင်သိရှိရပါသည်။ZayarThaw